कृषिमा पूर्व सासंद नारायणप्रसाद अधिकारी | माण्डवी एफएम
प्रकाशित मिति : २०७८ भाद्र ५, शनिबार १५:१७
प्यूठान भदौ ५
बि.सं.२०६४ सालमा संबिधान सभामा प्यूठान क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित सांसद हुन नारायणप्रसाद अधिकारी । उनी तत्कालिन समयमा नेकपा माओबादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए । बिस्तृत शान्ति सम्झौतापछि बि.सं. २०६४ सालमा संबिधान सभाको निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनबाट नेकपा माओवादी देशको पहिलो पार्टी बन्यो । देशमा जनताले चाहेजस्तो शासन नभएको भन्दै माओवादीले शसस्त्र जनआन्दोलनका थालनी ग¥यो ।
शान्ती सम्झौतापछि तोकिएको मितिमा संबिधान निर्माण हुन सकेन । देश र जनताले स्थिर सरकार र देशमा बिकास निर्माणले तिब्रता पाउने आशा राखेका थिए । तर जनताले सोचे अनुसार माओवादी सरकारले काम गर्न सकेन । त्यसपछि पटक पटक संबिधान निर्माणको समय सिमा थपिदै गयो । सरकारपनि एकपछि अर्काे गर्दै बहुमतको सरकार गठन हुन थाले । तर पटक पटक समय थप्दै गएपनि संबिधान निर्माण हुन सकेन ।
संबिधान निर्माण हुन नसकेपछि दोस्रो पटक निर्वाचन भयो । दोस्रो निर्वाचनमा प्यूठानका दुबै क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट हालका उपाध्यक्ष बामदेब गौतम र हिरा बहादुर केसीले प्रतिनीधी सभामा जिल्लाको प्रतिनीधीत्व गरे । पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित सासंद अधिकारी जिल्लामा राजनीतिमा क्रियाशिल रहदै आएका । बिद्यार्थी नेता हुदै राजनीतिमा लागेका अधिकारी नेकपा माओबादीबाट एक पटक सासंद पनि बने ।
जिल्लाको राजनीतिमा क्रियाशिल रहदै आएका अधिकारी अहिले राजनीतिसगैँ कृषि पेशामा रमाउदै आएका छन् । कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा फैलिएपछि फुसर्दिलो भए कृषिमा लागेको उनी बताउछन् । ‘कोरोना भाइरसकाका कारण राजनीतिबाट फुसर्दिलो भइयो’ उनले भने,‘गाउँका सबै तरकारी खेतीमा लागेपछि म पनि तरकारी खेती गर्ने थाले ।’ उनी बिगत २ बर्षदेखि ब्यवसायिक कृषिमा लागेका छन् ।
राजनीतिमा किसानका बिषयमा बोलेपनि कृषिलाई नजिकैबाट अनुभब गर्दा फरक रहेका उनी बताउछन् । आफुले किसानका बिषयमा धेरै बोलेपनि बास्तबिकतालाई नजिकैबाट नियाल्दा फरक भएको उनको बुझाइ छ । नेपालका नेताहरु बिलासिताको जीबनमा रमाउने गर्दछन् । तर उनी भने राजनीतिसगै कृषिकर्ममा तल्लीन छन् । उनी बिहानदेखि बेलुका अबेरसम्म तरकारी बारीमै रमाउने गर्दछन् ।
देशमा तिन तहका सरकार भएपनि भारतसगँको पारवहन संन्धीका कारण नेपालका किसानले मृल्य नपाएको उनी गुनासो गर्छन् । ‘सरकारले किसानका लागी काम गर्ने हो भने भारतसगँको ब्यापार संन्धीलाई हटाउनुपर्छ’ उनले भने । जसका कारण यहाका किसानले भारतको कृषि उपजसगँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । पछिल्लो समय सरकारले किसानका लागी अनुदान दिएपनि बास्तबिक किसानले नपाएको उनी बताउछन् । ‘स्थानीय तहले आफ्ना नजिकका मान्छेलाइ कृषि अनुदान दिन्छन नसले गर्दा बास्तबिक किसान मारमा छन’ उनी भन्छन् ।
उनीले माण्डवी गाउँपालिका २ रातापानीमा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा टमाटर खेती गरेका छन् । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा ठुलो सम्भाबना भएपनि बिचौलियाका कारण किसान मारमा परेको छन् । देशमा तिन तहको सरकार भएपनि केन्द्र सरकारले भारतसगँको पारबहन संझौतालाई रोक्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान तथा सहुलियत दिनुपर्ने उनको बुझाई छ ।